အီဟွာသူရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: WSK Camping (Second Day July 3, 2010)
နောက်နေ့ရောက်တော့ မနက်မိုးလင်း နံနက်စောစာ Breakfast ကို Home cook Korean Breakfast လေးစားပြီး အချိန်စောနေသေးတာနဲ့ အနီးအနားတစ်ဝိုက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တည်းခိုအိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ နေရာမှာပဲ Confucius School ဆိုတာလေး စိတ်ဝင်စားစရာသွားတွေ့ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေကတော့ အပြင်ဘက်နဲ့ အ၀င်ဂိတ်က မြင်ကွင်းလေးတွေပါပဲ။ ခပ်ဆင်ဆင်တွေချည်းပါပဲ ဆိုပေမယ့်လည်းပေါ့။
အထဲကို ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ အဆောက်အဦးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကမ္ဗည်းလေးတွေ့တာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့တာကို မူရင်းအတိုင်းပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Jeonju Hyanggyo: Hyanggyo wasalocal Confucian public educational institution to educate sons of the local Yangban and alsoashrine to Confucius during the Joseon Dynasty. It was originally located near Gyeonggijeon and was then moved in 1441 at the foot of Jwasan, West of Jeonju. The presnt buildings were reconstructed on this sot in 1603 during the reign of King Seonjo because the previous place was too far from center of the town. It contains Daeseongjeon where the memorial tablet of Confucius' father is preserved. Dongmu and Seomu where memorial tablet of eighteen Korea Confucian scholars are enshrined. Myeongryundang used asalecture hall and Dongjae used asadormitory.
ကမ္ဗည်းစာက အင်္ဂလိပ် ကိုရီးယားနှစ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတာပါ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကွန်ဖျူးရှပ်ဝါဒကို ယနေ့အထိကျင့်သုံးဆဲဖြစ်တာမို့ ဒီကွန်ဖျူးရှပ်ပညာရေးက ကိုရီးယားသမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍက အမြဲပါဝင်နေမှာပါ။ ကျောက်စာကို အကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြောရရင်တော့ ဒီ Jeonju Hyanggyo ကျောင်းကို ဂျိုဆောင်ခေတ် ကတည်းက တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ သားတွေကို ပညာသင်ပေးဖို့တည်ထောင်ခဲ့တာပါတဲ့။ မူလကတော့ Gyeonggijeon အနီးမှာတည်ထောင်ခဲ့ပေမယ့် 1441 မှာ Jeonju က Hwasan တောင်ခြေဆီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက် King Seonjo ဘုရင်လက်ထက်မှာ အဲဒီနေရာက မြို့နဲ့ဝေးလွန်းလို့ ယခုတည်ရှိတဲ့နေရာကို 1603 ခုနှစ်မှာ ပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Confucius နဲ့ သူ့ဖခင်ရဲ့ ကမ္ဗည်းတွေကိုလည်း ပင်မအဆောက်အဦးတွေမှာ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဘေးနှစ်ဘက်က အဆောင်၂ဆောင်ကတော့ အခန်း ၉ခန်းစီပါပြီး ပညာသင်ကျောင်းသားတွေ အတွက် အဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ (ကိုရီးယားတွေလည်း ရှေးတုန်းက ၉ဂဏန်းကို ကောင်းတယ်လို့ ယုံကြည်ပုံရပါတယ်။ မြေအကျယ်ကြီးမှာ နေရာလွတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတာတောင် တစ်ဆောင်ကို ကိုးခန်းပဲဖွဲ့ ထားတာကိုကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ချမိတာပါ။) အလည်ခန်းမကိုတော့ Lecture Hall စာသင်ခန်းမအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ် လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆောင်တွေရှေ့မှာ ပင်စည်ကြီး ကားထွက်ပြီး ကျောက်ဖြစ်နေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေရှိပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ ကမ္ဗည်းစာ အရတော့ သစ်ပင်ကြီးတွေက သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး လုံးပတ် 10.4 m ရှိပြီး အပင်အမြင့် 30 m ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ ပင်မခြံဝင်းနဲ့ နောက်ဘက်ကအဆောင်လေးတွေကိုကူးတဲ့ တံခါးပေါက်လေးပါ။ သူတို့တွေလည်း အရင်တုန်းက အရပ်တွေပုကြသလားမသိပါဘူး။ တံခါးပေါက်လေးတွေက တော်တော် နိမ့်ပါတယ်။ ကျောင်းဝိုင်းလေးက သိပ်မကျယ်တော့ နဲနဲလျှောက်ပတ်ကြည့်ပြီး ကားထွက်ဖို့အချိန်လည်းနီးလာလို့ ကားဆီပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
Sight Seeing in Jeonju
Jeonju မြို့လေးရဲ့မြင်ကွင်းကတော့ Seoul မြို့တော်ရဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ကွာခြင်တိုင်းကွာနေပါတော့တယ်။ Korean Style Housing တွေက နေရာအနှံ့မှာပါပဲ။ Tourist တွေအများကြီးလာတဲ့နေရာဖြစ်တာနဲ့အညီ အရာတိုင်းက ရှေးမူမပျက် ထိန်းသိမ်းထားသလို တစ်ဖက်ကလည်းခေတ်မှီနေပါတယ်။ အိမ်ပုလေးတွေနဲ့ လူနဲနဲ ကားကျဲကျဲ တကယ့်ကိုရှားပါးတဲ့ အရသာလေးကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကားကို တစ်နေရာမှာရပ်ထားခဲ့ပြီး ဒီနေ့မိုးလည်းမရွာ ရာသီဥတုလေးကလည်း လှနေတာမို့ လမ်းတစ်လျှောက် မြင်မြင်ရာကို ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ရင်း . . .
ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ Gyeonggijeon Shrine (정기경) ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ Tour Guide ကောင်မလေးက English လိုရေရေလည်လည်လိုက်ရှင်းပြပါတယ်။ Joseong Dynasty က ကိုရီးယားရဲ့ နောက်ဆုံးမင်းဆက် ဖြစ်ပြီး ဒီနေရာက Joseong Dynasty ကိုဦးဆုံးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Founder of Joseon Dynasty - King Tae-jo Lee ကို နောက်မင်းဆက်တွေအပါအ၀င် အခြားသူတွေက အလေးအမြတ်ပြုဖို့ တည်ထောင်ထားတဲ့ နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ 1592-98 အတွင်းမှာ ကျူးကျော်နယ်ချဲ့သူတွေကြောင့် အနည်းငယ်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့် 1614 ခုမှာ ယခုမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်တည်ဆောက် remodeled လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူအလေးအနက်ထားပြောသွား တာကတော့ ဒီဝတ်ပြုတဲ့နေရာရဲ့ တံခါးကြီးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်က လာရောက် ၀တ်အပြုခံတဲ့နေရာ ဖြစ်တာနဲ့အညီ တံခါးသုံးထပ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမှာ ဘုရင်စံရာအတွင်းနန်းဆောင်ကိုရောက်ပါတယ်။ တံခါးတွေမှာ အပေါက်သုံးပေါက်ထပ်ပါပြီး ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက်က တံခါးပေါက်တွေကိုတော့ သာမန်ပြည်သူတွေ အ၀င်အထွက် အဖြစ်အသုံးပြုပြီး အလယ်ဝင်ပေါက်ကြီးကတော့ ဘုရင်ကြီးနဲ့ နောက်ပါတွေသာ ၀င်ထွက်တဲ့အခါအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အလယ်တံခါးက အနီရောင် အလယ်ဂိတ်ဖြစ်ပြီး အနီရောင်သုတ်ထားတဲ့အကြောင်းက မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ၀င်မလာနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ရှင်းပြသွားပါတယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ နန်းတော်ထဲက ကမ္ဗည်းကျောက်စာတစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က လိပ်ကို အသက်ရှည်စေတဲ့ သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်ယူကြပါပြီး ခြင်္သေ့ရုပ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ခြင်္သေ့အထီး၊ အမစုံတွဲကို အသုံးပြုပါတယ်။ ခြင်္သေ့ရုပ်တုကို အထီးအမခွဲနည်းကတော့ ပါးစပ်ဟပြီးဟိန်းဟောက်နေတဲ့အရုပ်က အထီးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်တဲ့ ရှေးတုန်းက အမျိုးသမီးတွေကို နဲနဲ နှိမ်ချဆက်ဆံခံရတော့ အမျိုးသမီးတွေက keep quiet နေရတဲ့ သရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ညဖက်မှာ ဆီမီးထွန်းတဲ့ ကျောက်တိုင်ဆီမီးခွက်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ၀ါးပင်နဲ့ သူ့ရဲ့ အတိတ်နိမိတ်တွေကို အလေးထားတာနဲ့အညီ Shrine ခြံဝင်းရဲ့ ထောင့်တစ်နေရာမှာ ၀ါးတောလေးတွေ စိုက်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ Library ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားလို 공 အင်္ဂလိပ်လို Princess Hour လို့ခေါ်တဲ့ Coffee Prince ထဲကမင်းသမီးလေးပါတဲ့ ရာဇ၀င်ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြည့်ဖူးကြရင် နန်းတော် စာကြည့်တိုက်လေးကို သတိရ ခံစားမိကြမှာပါ။
ဒီပုံလေးတွေကတောိ့정기경ကအပြန် ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပြခန်းအသွားလမ်းဘေးက ရှုခင်းလေးတွေပါ။
ကိုရီးယားရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပြခန်း ဆိုပေမယ့် ဆေးလည်းရောင်းပါတယ်။ ဆေးမြစ် သစ်ဥ သစ်ဖုအခြောက်တွေကို သူ့နံမည်နဲ့သူ ခင်းကျင်းပြသထားတာ အနံ့ကြိုက်လို့လားတော့မသိဘူးမွှေးလို့ကြိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်အဖွဲ့ထဲက ကျောင်းသားတစ်ချို့ကတော့ အနံ့မခံနိုင်လို့ ဘာမှမကြည့်ပဲ အမြန်ပြန်ထွက်သွားကြလေရဲ့။ အရှေ့အနောက် ကွာခြားမှုပေါ့နော်။
ဒီပုံကတော့ တောကောင်တွေရဲ့ ဆေးဘက်ဝင် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေပြကွက်ပါ။
ဒါကတော့ ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးတွေကို ပြထားတာပါ။ အ၀တ်ထုတ်လေးတွေကလည်း မွှေးလို့ ခေါင်းကို ကြည်သွားတာပါပဲ။
ဒီဂျင်စင်းအမြစ်ကိုစိမ်ထားတဲ့ပုလင်းကြီးတွေက ၀မ်တစ်သိန်းခွဲနဲ့ တစ်သိန်းပါ။ တန်သလိုလိုပါပဲ။
အပြင်ဘက်ဈေးတန်းလေးကလည်းမြန်မာပြည်ကအတိုင်းပါပဲ။ ရောင်းကုန်ပဲမတူတာပေါ့။ Nepal ကသူငယ်ချင်းနဲ့ Paraguay နိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။
သူတို့ရောင်းတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဘူးသီးခြောက်ကို အလှဆင်ထားတာလေးတွေ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘူးသီးခြောက်တွေပေါသလားမမေးနဲ့နော် Creativity လေးထည့်လိုက်ရင် market ဆိုတာ အလိုလိုပေါ်လာမှာပါ။
ဆေးပြတိုက်ကအပြန်ကိုရီးယားစက္ကူလုပ်တဲ့ဆီအသွားလမ်းတစ်လျောက်မှာ . . .
ကိုရီးယားနိုင်ငံကို သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ 한국 (ဟန်းဂု) လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်း ဟန်ဆိုတဲ့ စကားပါရင် ကိုရီးယားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသွားပါတယ်။ ဥပမာ ကိုရီးယားအစားအစာဆို 한식 (ဟန်ရှိ)၊ ကိုရီးယား ရိုးရာဝတ်စုံဆိုရင် 한복 (ဟန်းဘုတ်)၊ ကိုရီးယားရွာလေးတွေဆို 한욱 (ဟန်နု) ကိုရီးယား စက္ကူဆိုလည်း 한지 (ဟန်ဂျီ)လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်း အခု ကိုရီးယားစက္ကူထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ အိမ်လေးဆီသို့ လေ့လာဖို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စက္ကူကို Mulberry tree ကနေ အခေါက်ခွာပြီး လုပ်ရတာဖြစ်လို့ စက္ကူရဲ့ Quality က Unique ဖြစ်နေပြီး ဈေးလည်းအလွန်ကြီးပါတယ်။ သစ်ပင် ကနေလုပ်ရတာကိုး . . .
ဒါကတော့ Mulberry tree and its bark မာလ်ဘယ်ရီပင်နဲ့ သစ်ခေါက်တစ်ချို့ကိုအခြောက်လှမ်းထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ စက္ကူနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ အကျီ င်္ပါ။ စက္ကူနဲ့ချုပ်ထားတော့ ဘယ်မှာသုံးဖို့လဲဆိုရင် အသုဘအခမ်းအနားတွေမှာ အလောင်းကိုဝတ်ပေးတာပါတဲ့။ Order မှာမှချုပ်ပေးပါတယ်။ တစ်ထည်ကို ၀မ် ၇၀၀၀၀ ရှိပါတယ်တဲ့။ ခါးပတ်က အရင် တုန်းကတော့ နဂါးခေါင်းခါးပတ်ဆို မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေသာသုံးခွင့်ရှိခဲ့ပေမယ့် ခုခေတ်ကတော့ လူတိုင်းသုံးခွင့်ရှိပါတယ် ဈေးတော့နဲနဲပိုပေးရတယ်ပြောပါတယ်။
ဒါကတော့ စက္ကူပေါ်မှာ တကယ့် ထင်းရူးသားအခေါက်နဲ့ ထင်းရူးသီးလေးတွေကို သုံးပြီး ကော်နဲ့ကပ်ပြီး ပန်းချီကားပုံရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို Idea သာရင်သာသွားကြတာပါပဲ။ ငယ်ငယ်က ရှမ်းပြည်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့တော့ ရှမ်းစက္ကူလို့ခေါ်တဲ့ မိုင်းကိုင်စက္ကူက ကိုရီးယားစက္ကူဆန်ဆန်ပါပဲ။ ထင်းရူးပင်နဲ့ ထင်းရူးတော တွေကြားမှာ နေလာခဲ့ပေမယ့် ဒါမျိုးဘယ်သူမှစိတ်ကူးရရလုပ်ကြတာမတွေ့မိခဲ့ပါဘူး။ ဒီစာလေးဖတ်မိတဲ့ သူတွေ စမ်းချင်ရင် စမ်းကြည့်လို့ရပါစေဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒါကတော့ ရိုးရိုး မင်တစ်ရောင်တည်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကားပါ။ ပြတင်းပေါက်စက္ကူကပ်တော့ plain မဟုတ်ပဲ ပန်းချီကား လေးနဲ့ဆိုတော့ လှတာပေါ့။
အပြန်လမ်းလေးမှာ . . .
စက္ကူလုပ်တဲ့နေရာကပြန်လာတော့ ကိုရီးယားယပ်တောင်လုပ်တဲ့ဆီကို ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယပ်တောင် လုပ်ပြီးသားအကြမ်းကို ရောင်စုံစက္ကူလေးတွေနဲ့ ဂျုံကော်နဲ့ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ လက်နဲ့ပဲ စက္ကူလေးတွေကို ဖြဲဖြဲပြီး လိုရာဒီဇိုင်းဖော်ပြီး ကပ်ရပါတယ်။ ပေးတဲ့အချိန်ကတိုတာရယ် လက်တွေကလည်း ကော်တွေနဲ့ပေနေလို့ စက္ကူ ယပ်တောင်လုပ်နေတဲ့ပုံလေးတွေတော့မရခဲ့ပါဘူး။
ပြန်အထွက်မှပဲလမ်းတစ်လျောက်မှာ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ရင်း နောက်ဆုံး မြို့အထွက်လိပ်ရုပ်ကြီးနားမှာမှ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ယပ်တောင်လေးနဲ့အမှတ်တရဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
Jeonju ကမပြန်ခင် နောက်ဆုံးနေ့လည်စာ စားကြတော့လည်း မရိုးနိုင်တဲ့ 전주 비빔밥 (ဂျော်န်ဂျူဘီဘင်မ်ဘတ်ဘ်) လို့ခေါ်တဲ့ Jeonju ထမင်းသုတ်ပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ မုန့်ဟင်းခါးကို အကြိုက်စားကြပေမယ့် မြို့အလိုက် ချက်တဲ့စတိုင်နဲ့ အရသာကွာသလို တစ်မြို့တည်းမှာတောင် ဆိုင် ကွာရင် အရသာကွာသလိုပေါ့။ ဒီဆိုင်ကျတော့လည်း အရသာတစ်မျိုးနဲ့ ကောင်းနေပြန်ရော။ နံမည်ကြီးမယ်ဆိုလည်းကြီးထိုက်ပါ ပေတယ်။ တကယ့်ကို မမေ့နိုင်တဲ့ အရသာပါပဲ။
Posted by ewhainnshwe at 1:37 AM